Gbasara Anyị - Yiwu Mia Imp & Exp Co., Ltd.
Obere ụmụ nwoke
Ihe ịchọ mma ụmụaka
ụmụaka ọla ntị
ụmụaka jewelery set
Hairmụaka ntutu ntutu
ụmụaka adịgboroja ntutu
ụmụaka ntutu gbalaga
ụmụaka ntutu mboanuohia
ụmụaka ntutu clip
ụmụaka ntutu elastics
ụmụaka ntutu akaghị
ụmụaka azu paaki
ụmụaka afọ akpa
ụmụaka Busket akpa
ụmụaka ego akpa
ụmụaka ịchọ mma akpa
ụmụaka mgbatị akpa
ụmụaka ubu akpa
basemụaka baseball okpu
ụmụaka ahịhịa okpu
ụmụaka oyi uwe
ụmụaka oyi okpu
ụmụaka oyi ịchafụ
ụmụaka oyi set
Ihe N'onwe Gị
N'onwe Gị ngwa
Mee N'onwe Gị mma
N'onwe Gị ákwà
Mee N'onwe Gị ngwá ọrụ
Mee N'onwe Gị eriri
N'onwe Gị ngwaahịa osisi
Mpaghara Market 2
Mpaghara Market 3
Yiwu Mia Imp & Exp Co., Ltd. e hiwere na Yiwu obodo nke China na 2007, mgbe afọ iri na atọ nwee ahụmahụ na nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ahịa na-adọkpụ, ndị na-ebubata ngwaahịa na ndị na-ebubata ngwaahịa, Mia Imp & Exp ngwaahịa ahịrị gbasaa nwayọ nwayọ site na ọla gaa ngwa ejiji, ngwa ngwa ụmụaka, ihe egwuregwu, nchekwa njem, ngwaahịa mmekọahụ, Ihe 3C, ihe DIY, ihe oriri, ihe anụ ụlọ na ahịa ndị ọzọ. N’ịbawanye na nkezi nke 10% kwa afọ maka 13 consecutive afọ, Mia Imp & Exp, na ihe karịrị 100 ndị ọrụ, ruru 30 nde US dollar kwa afọ ahịa, na-enye onye-nkwụsị mbubata na mbupụ ahia ọrụ maka accumulative 1000 anụ ụlọ na ndị mba ọzọ ahịa ruo 2020.
Iji merie ndị asọmpi, Mia Imp & Exp nwere ọfịs dị na Yiwu, Hangzhou na Guangzhou, na-eme ka China kwado ngwaahịa niile kwesịrị ekwesị, mma kacha mma na ọnụahịa ndị ahịa anyị n'ụwa niile. Site na ụlọ 5000 square mita, Mia Imp & Exp emeela ụlọ nkwakọba ihe 3000 iji hụ na nnyefe na-agbanwe agbanwe na 1000 square mita ngosi na-egosipụta ihe karịrị 50,000 ihe.
Iji mezuo ebumnuche mbụ, anyị haziri ndị otu ọkachamara sitere na Italytali na Japan ka ha dịrị ọhụrụ. Iji mezuo njikwa mma, anyị haziri ndị ọrụ QA na QC nwere ahụmịhe iji jikwaa njikwa mma, wee hibe ụlọ ọrụ nyocha nke Menoch Inspection Co., Ltd iji zute mkpa njikwa njikwa mma
Ka ọ dịgodị, anyị na-na ịga mmiri / Mgbụsị akwụkwọ Canton ngosi ebe ọ bụ na 2007, na-aga na pụrụ iche ngosi na Hong Kong, USA, Germany, UK, Japan na ect. inwekwu ohere izute ndị ahịa anyị ochie ihu na ihu, ma nwee ike izute ndị ahịa ọhụrụ.
Anyị Line Of Business
Zụta ndị ọrụ na China niile
Na ụlọ ọrụ dị na Yiwu, Hangzhou, na Guangzhou, na-emegharị china iji kwado ngwaahịa niile dabara adaba, mma kacha mma na ọnụahịa.
-Lọ ọrụ mbupụ nkwụsị
Ejiji ejiji, ngwa ụmụaka, ihe egwuregwu, nchekwa njem, ngwaahịa mmekọahụ, ihe 3C, ihe ndị Mee N'onwe Gị, ihe oriri, ihe anụ ụlọ na ngwa ahịa ndị ọzọ.
Gụnyere nyocha zuru oke, ọrụ nkwụghachi azụ, nyocha nke atọ na akụkọ nyocha China na Bekee.
Nhazi nke nzukọ anyi
■ Afọ iri na atọ ahụmịhe ahịa ngwaahịa izugbe na nnukwu ụlọ ahịa, agbụ ụlọ ahịa, ndị ahịa na ndị na-ebubata ngwaahịa.
■ TOP 10 nke na-abụghị nri soplaya ekspootu na Yiwu. Ahụmịhe bara ụba iji wuo ndị ahịa ọhụụ.
■ Karịrị Directlọ ọrụ 1000.
■ 3000 square mita nkwakọba.
■ 1000 square mita ezigbo and online ngosi na Yiwu, Hangzhou na Guangzhou na ihe karịrị Ihe 50,000.
■ 500 square mita ụlọ nkwakọba ihe gụnyere agịga agịga na akụrụngwa ule.
■ Ọkachamara QA na QC otu ịlele niile ngwaahịa tupu Mbupu na AQL ọkọlọtọ.
■ Ọrụ ọtụtụ asụsụ gụnyere English, Japanese, Spanish, German, French, Russian.
■ Ọkachamara imewe otu si tali na Japan maka ngwaahịa na ngwugwu ngwugwu.
■ Nkwado ego siri ike na mkpuchi mkpuchi.
■ Usoro nkwụnye ego na-agbanwe agbanwe.
■ Mara nke chọrọ EU na USA chọrọ nyocha, nye ngwaahịa ECO-enyi na enyi, imekọ ihe ọnụ ogologo oge na SGS, TUV na BV.
kọntaktị Onye: Bonnie Zhang (Onye isi ahia)
Adreesị: Mba. 293 Qunying Road, Houzhai Industrial Mpaghara, Yiwu 322000, Zhejiang, China